Big Three | The Blue Book
ဆာလံကျမ်း ၅၁း၁၀ ၌ ဤသို့ဖော်ပြထားသည်။ “အိုဘုရားသခင်၊ အကျွန်ုပ်အထဲ၌ စင်ကြယ် သောနှလုံးကို ဖန်ဆင်းတော်မူပါ။ မြဲမြံတည်ကြည်သော သဘောကို အသစ်ပြုပြင်တော်မူပါ။” ခရစ်တော်၏နောက်လိုက်အနေနဲ့၊သန့်ရှင်းသောနှလုံးသားနှင့် ဘုရားသခင်ရှေ့၊လူရှေ့၊ မှာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်။ သန့်ရှင်းသောနှလုံးသားနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာ၊ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုရှိနေစေရုံသာမက၊ ဘုရားသခင်နဲ့သာ၍ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုရရှိစေပါတယ်။ သန့်ရှင်းသောနှလုံးသားအားစစ်ဆေးနည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာ၊မှားယွှင်းနေတဲ့အရာတွေကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ? ခါးသီးခြင်းတွေကိုနှလုံးသားထဲမှာသိုထားခြင်းဟာ၊ဘာကြောင့်မကောင်းတာလဲ? နှလုံးသားအမြဲတမ်းသန့်ရှင်းနေအောင်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ? သမ္မာကျမ်းစာကိုရေးခဲ့တဲ့အချိန်အခါတုန်းကလူတွေဟာ၊ နေဝင်တဲ့အချိန်မှာအိမ့်ရာဝင်ကြပါတယ်။ နေ့ရက်ရဲ့ဘယ်အချိန်ဟာသူတစ်ပါးကိုခွင့်လွှတ်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်လဲ? ဘယ်အရာဟာ ကျွန်တော်တို့ဘဝထဲမှာစာတန်မာရ်နတ်ကိုခြေကုတ်ယူဖို့နေရာပေးနေတာလဲ? စာတန်မာရ်နတ်ကိုနှလုံးသားထဲမှာအခွင့်မပေးမိအောင်ဘယ်လိုရှောင်ရှားမလဲ? What do we need to “guard” our heart against? Have there been times where you let unforgiveness, bitterness or anger into your heart? AskaFriend How often do you …
ဘုရားသခင်နှင့်စကားပြောခြင်း ဆုတောင်းခြင်းဟာ၊ဘုရားသခင်နဲ့စကားပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မည့်သည့်ဆက်ဆံရေးမဆို၊အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မူကလိုအပ်သလို၊ဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော့်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာလည်းလိုအပ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူနဲ့အမြဲတမ်းစကားပြောစေလိုပါတယ်။ ယေရှုဘယ်လိုဆုတောင်းခဲ့လဲ? (ကိုယ်တော်သင်ပေးသော ပဌာနာတော်) ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆုတောင်းသင့်သလဲ? ဘယ်လိုဆုမတောင်းသင့်ဘူးလဲ? ကျွန်တော်တို့ဘာအတွက်ဆုတောင်းသင့်သလဲ? အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ကျမ်းပိုဒ်ကိုရေးကြရအောင်: ဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းရန် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အတွက်နှင့်အခြားသူများအတွက်ဆုတောင်းရန် မိမိအတွက်ဆုတောင်းရန် ခွင့်လွှတ်ခြင်းအတွက်ဆုတောင်းရန် (သန့်ရှင်းသောနှလုံးသား) ထိရောက်သောဆုတောင်းခြင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောင်းချက်တွေကိုထိရောက်မူရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ? သင့်ရဲ့အတွေးတွေကိုဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပါ ဆုတောင်းခြင်းရှိတဲ့ဘဝနေထိုင်မူပုံစံတစ်ခုကိုပျိုးထောင်ပါ။ ကျွန်တော်တို့အတွေးတွေကိုဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲ? ဘယ်နှစ်ကြိမ်ဆုတောင်းသင့်သလဲ? ဘယ်အချိန်မှာဆုတောင်းသင့်သလဲ? သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုမေးကြည့်ပါd ဘယ်အချိန်၊ဘယ်နေရာမှာဆုတောင်းလဲ? ဘာအတွက်ဆုတောင်းလဲ? ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီးအခြားဘာမေးခွန်းတွေရှိလဲ? မင်းအတွက်ဆုတောင်းဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်နဲ့နေရာကဘယ်မှာလဲ? ဆုတောင်းခြင်းတွေရဲ့အဖြေကောရခဲ့ပြီးပြီလား? လက်တွေ့အသုံးချရန် ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းဖို့နဲ့ကျေးဇူးတင်ထိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကိုစဥ်းစားကြည့်ပါ။ (ဥပမာ = ကယ်တင်ခြင်းအတွက်) ဆုတောင်းပေးချင်တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုစဥ်းစားကြည့်ပါ။ (ဥပမာ = မိသားစုဝင်တစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်) ဆုတောင်းတဲ့အခါတောင်းချင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုစဥ်းစားကြည့်ပါ။ (ဥပမာ = စာမေးပွဲအတွက်) ဆုတောင်းခြင်းပုံစံ ယေရှုဘုရား၊ကျွန်တော့်ဆုတောင်းခြင်းတွေနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဆုတောင်းခြင်းတွေကိုယ့်တော့်ကိုပေးအပ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော့်ဆုတောင်းခြင်းတွေကိုအဖြေပေးဖို့အခွင့်အာဏာရှိကြောင်းကိုလည်းယုံကြည်ပါ၏။ မှတ်ထားရမည့်ကျမ်းချက်
Hearing the Voice of God We can expect God to speak to us everyday, or as often as we makeahabit of reading the Bible. Journaling is writing down personal applications of what we feel God’s Word is speaking into our lives. God’s Word will encourage us and help us grow. The Word of God How do the following …
« ပထမဆုံးလအတွက် Journaling